Amakamera Worn Wamaphoyisa Amaphoyisa Kulindeleke ukuthi akhombise Ukuqashelwa kobuso | Izixazululo ze-OMG
Amakhamera we-Worn Police Body Wired kulindeleke ukuba afake Ukuqashelwa kobuso
I-software yokwazisa ngobuso yithuluzi elisetshenziselwa ukuqhathanisa ubuso obuthile obonwa ku-database yephrofayili yobuso ukuthola umdlalo futhi futhi uthole imininingwane eminingi yokuthi umsolwa ungubani. Uma usebenzisa amakhamera agqokwa ngomzimba futhi ukubuyekezwa kwenzeka ngevidiyo, kubalulekile ukukwazi ukubona ubuso futhi uthole imininingwane yabo ukwazi okwengeziwe ngabo ngenkathi uhlola amarekhodi abo obugebengu neprofayili yabo. E-US umthengisi omkhulu kunabo bonke bamakhamera agqokwa ngumzimba ezinhlanganweni eziqinisa umthetho wenza ibhodi lezinkampani elizinikele ekwandeni okukhulu kobuhlakani bokufakelwa (AI). Lesi kube yisinyathelo esikhulu esithathiwe ekuletheni ubuchwepheshe obukhona bokuphikisana nobuso ekuphathweni kwamaphoyisa emhlabeni jikelele. Izinkampani ezinjengo-Axon, abadali bezikhali ze-Taser namakhamera agqokwa ngomzimba asetshenziswa ngamaphoyisa emhlabeni wonke, nawo aveze isasasa lawo ekuqhubekeni nasekuhlanganiseni isoftware yokubonwa kobuso kobuchwepheshe babo obugqoke umzimba. Lobu buchwepheshe buzovumela izikhulu ezazihamba nge-patrol ukuthi zikwazi ukuskena ziphinde zibone ubuso banoma ngubani abubonayo futhi zingasola ngenkathi zivela. Izinkampani eziningi ezintsha ezikhula ngobuchwepheshe obusebenzisa ubuchwepheshe bokubhekwa manje sezisemncintiswaneni wokuguqula ukuqashelwa kobuso kanye namanye amakhono amaningi we-AI phakathi kwamavidiyo wesikhathi sangempela.
Kungekudala nje ngemuva kokuba kudalwe ibhodi yokuqashelwa kobuso, iqembu elinamalungelo omphakathi angaphezu kwe-20, ubuchwepheshe kanye namaqembu obumfihlo athumela incwadi ekhuluma ngezinkinga ezinkulu ngokuqondisa okukhona lapho inkampani yakwa-Axion nebhodi yayo esanda kusungulwa yaholwa. Le ncwadi yathunyelwa, yayifuna ukuthi kuvinjelwe ngokushesha uhlelo lokuqashelwa kobuso obusetshenzisiwe. Bathe bekuyinto engeyona inkambiso ukuhambisa, ngoba i-software inemiphumela eminingi yobumfihlo, ukungapheleli kwezobuchwepheshe kanye nokubandlulula okubeka engcupheni okuhambisana nokuphila. kutholakele ifomu locwaningo lwakamuva lokuthi isoftware yokuqashelwa kobuso ayinembe kakhulu lapho ifinyelela abantu abanesikhumba esimnyama. Lokhu kuvule ingxenye eyingozi lapho i-AI ingakhomba khona isakhamuzi esingenacala futhi lokhu kungaholela enkingeni enkulu. Umsunguli we-Axion nokho uphendule emphakathini ukuthi inkampani ayikazakhi izindlela zokuqashelwa kobuso njengamanje, kepha bayibheka kakhulu ngemikhiqizo nakwizinto ezizayo. Ukwamukele iqiniso lokuthi uhlelo lungahle lube olungaphelele futhi lungasetshenziswa kabi futhi futhi lube nokuthambekela kokukhonjwa kwalo, kodwa-ke usizo oluningi olulethayo alunakushaywa indiva ngokuphelele ngoba luyizici ezingasiza kakhulu ngokuzayo.
Inkosi yakwa-Axion iphinde yagcizelela ukuthi ayizizwa sengathi uhlelo lokuqashelwa kobuso luyisixazululo esifanelekile, kepha ukuthi izwe esiphila kulo namuhla selithuthukile kakhulu nokuthi ngeke sikwazi ukushiya imisebenzi yamaphoyisa emaphoyiseni ngenhloso yokuthi sibambe izigebengu ngokungahleliwe. amathuba wokuthola ubuso. Ukulindela amaphoyisa ukuthi akhumbule ubuso bawo ukuthi ufunwa ngubani nje akuhlali kahle. Ukholelwe ukuthi ngeke kube nokukhiqiza futhi ube nesifiso sokungabi nalobu buchwepheshe obusha onabo. Ubuye wabuza ukuthi kungani amaphoyisa e2020 kufanele asebenzise imishini evela kwi1990 ngenkathi enza umsebenzi wawo, ethi kuzosho nje ukuthi umhlaba ukhethe ukungalithuthukisi noma ukukhula. Le nkampani yaqhubeka nomhlangano wayo wokuqala, yamema izinkampani zakwa8 ezikhethiwe ochwepheshe ku-AI, inkululeko yomphakathi kanye nezobulungiswa bobugebengu. Amalungu ebhodi wonke ayengamavolontiya nje ayekhokhelwa futhi engenawo amandla angempela okushintsha okuningi. Babuye bacelwa ukululeka le nkampani ngokusebenza ngokuzayo kohlelo lokuqashelwa kobuso, ngenkathi ziveza nokuthi zingasiza kanjani ukuletha ukusebenza kahle kwamaphoyisa nokusebenza kahle kwawo. Ukuqashelwa kobuso kudala kwafunwa ekuqinisekisweni komthetho nokubhekwa kukahulumeni ngezinzuzo ezinkulu kakhulu, futhi ukwehla kwakamuva kwezindleko zamakhamera ngentuthuko enkulu kakhulu ekuthuthukisweni kwe-AI kwenze ukuthi lesi siphakamiso siphendekeke ngokwengeziwe. Onjiniyela kulo mkhakha kade bewuphakamisa okwesikhashana becela ukuthi usetshenziswe endimeni ebanzi. Cishe i-117 yezigidi zabantu abadala baseMelika ezingaba cishe ingxenye yesigamu ingatholakala kwi-database uhlelo lokuqashelwa kobuso lusebenza nomdlalo nalo.
Ukusebenzisa ubuso kuyindlela elula kakhulu yokwazi umuntu okude, kungaba kuvidiyo noma nangesikhathi sangempela. Kulula ukubeka izandla phezu kwalezo ezinye izikhombi zebhayometri ezibandakanya ukukubandakanya ukusondela noma ukuxhumana nabantu ngokomzimba nokusondela kubo. Kepha abagxeki baphinde bakhetha ukuthi ukuqashelwa kobuso akuyona ngempela ukuthembeka njengoba idatha yobuso enayo ingaguga noma iguquke ngenxa yesimo, ingozi kanye nokukhokhiswa okungaphezulu kokwenza umzimba ukubukeka komuntu. Kepha kunaleso sizathu esifuna ukwamukelwa emhlabeni wonke ngokushesha ukuthi, uma iphoyisa likuhudula futhi lingakuqapheli ikhamera yakhe yomzimba enesistimu yokuqashelwa kobuso iyokwazi. Ngale ndlela uzokwazi ukutshela okuningi ngawe futhi akufanise negoli. Amacala afana nalawa angasiza ngempela uma sekumile futhi kuseshwa isigebengu.
Ngabe lusebenza kanjani uhlelo olusha lokubona ubuso?
UMassimiliano Versace owayengusosayensi ozelwe wase-Italy futhi ongumsunguli wenkampani yokuqalisa isoftware yeNeurala -an. Kwenziwe yize kusalindwe ilungelo lobunikazi lobuchwepheshe bokufunda bomshini obunokubonakala kwesithombe okunamandla. Ngokuvamile, ukubonwa kobuso kusebenza ngokufunda komshini, okuqeqesha ikhompyutha ukuthi icabange yodwa ngokuyinikeza idatha eyinkimbinkimbi engeza kudathabheyisi yayo. Kancane kancane kepha ekugcineni, ikhamera encane esehlombe lephoyisa iyakwazi ukukhomba ubujamo kunemibala futhi kamuva yaqeqeshwa ukukhomba ubuso babantu, ngenkathi ibuye ifane ne-database yobuso nephrofayili (igama mhlawumbe). Kuyinqubo esebenza ngokulingisa ubuchopho bezilwane ezincelisayo, kunendlela indlela amakhompyutha asebenza ngayo ngokujwayelekile ngokucela imiyalelo yokwenza. Leli fomu elisha lizenzela ngokwalo, vele uvule ikhamera bese uyibuka njengoba likhomba wonke umuntu oseduze. UVersace uchaze inqubo yokuqhamuka, ngokuyisisekelo njengeqoqo elincane labaprosesa abasebenza njengezingxenye ezahlukahlukene zobuchopho. Ubuye wachaza ukuthi lezi zibalo zingahlukaniswa phakathi kwezingxenyekazi zekhompiyutha ezicubungula okokufaka njengobuchopho ne-hardware esebenza njengama-dendrites nama-axon. Ucwaningo lwakhe lukhombise kakhulu ukuthi i-AI ifunda okuningi endaweni enjalo ngenkathi isebenzisa amakhodi ambalwa. Ngokwehlisa empeleni inani lekhodi elidingekayo ekubonweni kwesithombe, usebenzisa ukucutshungulwa okuningi futhi okuncane futhi lokhu kusho ukuthi namakhompyutha angenamandla kangako, angenawo amandla wokucubungula amaningi nawo angafeza umsebenzi owunikiwe. Kufika lapho iphuzu lokuthi ikhompyutha elingana nekhamera yomzimba ikwazi ukubona isithombe ikhamera eqeqeshwe ngamasethi wedatha okufanele asibheke. Ngemuva kwalokho kufanele yenze ukufunda okuthile ukuze ekugcineni ihambisane nesihloko.
Lokhu kugcina kungumthombo ongenamkhawulo ogcina udale uhlelo lokusebenza olusha lwabasebenzisi bokuphepha komphakathi. Ake siqale ngecala elifanele uma uthatha isibonelo sokuthi ingane ilahlekile nabazali banqume ukuvakashela iphoyisa eliseduzane elizolanda. Ikhamera egqoke umzimba kwisikhulu ibona ingane futhi iqopha isithombe sengane elahlekile, ngokwenza lokhu injini ye-AI ifunde ukuthi ingane ibukeka kanjani. Isebenzisa ngokushesha injini ukuthumela isithombe kuwo wonke ama-Cops asebenzisa ikhamera egqoke umzimba ukusebenzisa i-cam yazo ukubona imvelo. Uhlelo lwanamuhla lokuqashelwa kobuso ngokuvamile lunokuntuleka kokuhlukahluka kwezithombe, lokhu kungumphumela wedatha abaqeqeshelwe kuyo. Abaphenyi baseMassachusetts Institute of Technology (MIT) lab abezindaba bathi izindlela ezintathu ezihola phambili zokuqashelwa kobuso i-IBM, ubuso ++ neMicrosoft zinethuba eliphakeme lokuthola abantu abamhlophe (99%) kunabantu abamnyama (70%).
Ukuphetha ngakho konke, amakhamera omzimba abonakala ethandwa ukusetshenziswa njengokubona njengoba ayesetshenziswa ukuhlola ukungaziphathi kahle kwamaphoyisa. Ezikhathini zamuva nje kuye kwagxekwa ngokunikela ngokuqhubekayo ekubhekeni okwenzeka ezweni lonke kanye nokwenza izinto zibe zimbi kakhulu endaweni lapho kufakwe khona amaphepha amabi kakhulu. Ngokuqondene nomthetho wokusetshenziswa, lokho futhi kunqunywe ngumnyango wamaphoyisa. ES Sacramento, amanye amapholisa adubula insizwa egama layo linguStephen Clark, indoda emnyama engenazibhamu yadubula ekhanda likagogo wayo ngemuva. Izingqinamba ezinjengalezi zilethe abagxeki ekungabazeni ukuthi lisebenza kahle kangakanani ibhodi yezimilo zokuzithandela, ukuhlangana kabili ngonyaka, okuzobe kwenza izinqumo ezinqobayo ezizolawula izinkomba zezinkomba. Abaningi nje bayathemba ukuthi ukuqashelwa kobuso kuzofana neTaser okubuye kwanqatshwa kokuqala ngaphambi kokuthi kamuva kube nokwamukelwa okuqinile komhlaba jikelele njengesikhali esisetshenziswa kakhulu yizinhlangano zomthetho. Kumelwe kwenziwe amaphutha futhi izinkampani ezenza leli phutha zizojeziswa kepha ukuqhubekela phambili ngesinyathelo esikhulu esiyiso sokubonwa kobuso kubalulekile impela ekukhuleni kohlelo lokuphepha.
Amakhamera we-Worn Police Body Wired kulindeleke ukuba afake Ukuqashelwa kobuso igcine ukuguqulwa: Disemba 3rd, 2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-4767 Ukubuka kwe-3 Namuhla